रिसलाई नियन्त्रण गर्ने १०वटा तरिकाहरु । How To Control Anger In Nepali
Top 20 Attitude Inspirational Quotes for Better Life …
Anil Patel 8 months ago 1
हाम्रो जीवनमा दैनिक रुपमा सकारात्मक र नकारात्मक घटनाहरु घटी रहेका हुन्छन । सकारात्मक घटनाहरुमा हामी खुशी रहन्छौ तर नकारात्मक घटनाहरुमा हामी दुखि भइहाल्छौ ।
१. केहि बोल्नु भन्दा पहिला विचार गर्नु-
२. रिस आए पछि ठाउँ बदल्ने-
३. केहि राम्रो सोच्नुस र रिसलाई टाढा गर्नुस-
४. माफ गर्नु र विर्सिहल्नु को नियम-
५. आफ्नो खराब बानीलाई छोरदिनु-
६. एक्लै बसेर सिक्ने, आफ्नो जीवन को लक्ष्य बनाउने-
<a href="http://<!– wp:paragraph –> <p><strong>७. Self Help Words ( स्याम सहायता ) को प्रयोग गर्न जन्नुस-</strong><br>यदी तपाई दिनमा दुइ वा तिन चोटी Self Help Words को प्रयोग गर्नु हुन्छ भने तपाइलाई रिस आउदैन ( लाग्दैन ) यदी आउछ भने त्यो पनि बहुत कम आउछ । तपाई योसबै Self Help Words हरुको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ।</p> <!– /wp:paragraph –> <!– wp:list –> <ul><li>मा एउटा शान्तिप्रिय व्यक्ति हो ।</li><li>मा सधै सकारात्मक रहन्छु ।</li><li>मा सधै खुशी रहन्छु । आदि ।</li></ul> ७. Self Help Words ( स्याम सहायता ) को प्रयोग गर्न जन्नुस-
८. राम्रो किताब पढ्ने र गेम खल्ने-
९. सकारात्मक सोच्ने र सकारात्मक कार्य गर्ने-
१०. गित सुन्ने र ध्यान गर्ने-
आजकलको जीवन यती व्यस्त भइसकेको छ कि सानो सानो कुरामा पनि रिस उठी हाल्छ । यही रिसले कहिले कहिँ विशाल रुप लिई हाल्छ अनि हामीलाई ठुलो क्षेती पुर्याई दिन्छ । धेरै जनालाई रिस गर्ने बनि बसी हाल्छ । उनीहरुको मस्तिष्कमा सधै रिस नै भरेको हुन्छ । रिस गर्ने व्यक्ति जब आफ्नो रिसलाई बनि बनाई दिन्छ त् पछि उसले चाहेर पनि आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । रिस गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ । यसले गर्दा धेरै जना मानसिक विमारी पनि भइहाल्छ र Blood Pressure पनि बढी हाल्छ ।
आज मैले रिस काबु ( नियन्त्रण ) गर्ने तरिका बताउन गइरहेछु । यो तरिकाहरु अपनाएर तपाई आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु हुन्छ साथै आफ्नो जीवनलाई सुखिमय बनाउन सक्नु हुन्छ ।
रिसलाई नियन्त्रण गर्ने १० वटा तरिकाहरु- How To Control Anger In Nepali
यदी तपाइलाई रिस आउछ भने आफ्नो अगाडी उभेको मान्छे संग जे पनि बोल्ने, बोल्नू भन्दा पहिला विचार गरि हाल्ने कि मैले केहि गलत बोल्न गएछैन । यदी तपाइलाई लाग्छ कि ठिक छ भने बोलदिने । तेज आवाजमा कुरा नगर्ने । यो तरिकाबाट तपाई गलत बोल्नु बाट बाच्नु हुन्छ । र सामुन्ने भएको मान्छे बाट तपाइको नाता पनि खराब हुदैन ।
जहिले पनि तपाइलाई रिस लाग्छ भने तपाई त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउमा गइहाल्ने । वा जुन व्यक्ति माथि तपाइलाई रिस उठेछ भने तुरन्तै त्यसबाट टाढा गइहाल्ने । यस्तो गर्नले यो फाइदा हुन्छ कि जुन ठाउँमा वा जुन व्यक्ति माथि तपाइलाई रिस उठेछ, त्यो तपाइको सामुन्ने हुदैन । तपाई रिस हुने र त्यसबाट हुने नुक्सानबाट बाच्न सक्नु हुन्छ ।
यो रिस भगाउने सब भन्दा राम्रो तरिका हो । तपाइलाई जहिले पनि रिस उठ्न थाल्छ भने केहि राम्रो सोच्न सुरु गर्नुस । यसको लागि आफ्नो कल्पना गर्ने शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । तपाई आफ्नो मानसिक कल्पना गर्ने शक्तिको प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनमा घटेको राम्रो घटनाहरु सम्झना सक्न्नु हुन्छ वा केहि राम्रो मानसिक चित्रण गरेर आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्न सक्नु हुन्छ ।
Also Read:- How To Increase Productivity In Nepali
रिसलाई समाप्त पार्नको लागि भुल्नु नै सबभन्दा राम्रो उपाय हो । यसको लागी तपाई कुनै व्यक्तिबाट भएको गल्तिलाई बिर्सिनु पर्छ । यदी कसैबाट कुनै यस्तो गल्ति भएछ जसलाई माफ गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई तुरन्त माफ गरिदिने । यो नियम अपनाएर तपाई फिजुल रिस आउनुबाट बाच्न सक्नु हुन्छ । र मान्छेहरुको आखामा एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्नु हुन्छ ।
यदी तपाई सिगरेट, तम्बखु, शराब आदि लिनु हुन्छ भने यिनीहरुलाई तुरुन्त छोरदिने किनकी यी सबै चिजहरुले रिस उठाउने काम गर्छन । यसको साथै यी सबैले तपाइको स्वास्थ्यमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ । यी सबै चिजहरु धेरै पैसा पनि खर्च हुन्छ तसर्थ यो खराब बानीलाई चोरदिनुस र राम्रो जीवन को बाटोमा अगाडी बढ्नुस ।
६. एक्लै बसेर सिक्ने, आफ्नो जीवन को लक्ष्य बनाउने- जहिले पनि तपाइलाई रिस आउँ थाल्छ भने त्यो ठाउँ छोरेर कुनै एकान्त ठाउमा गएर शान्त रुपले बस्ने र चिलाउने । यस्तो गर्नाले तपाइको भित्रि रिस बाहिर निस्की हाल्छ । यो तरिकाले तपाई आफुलाई शान्त महसुस गर्नु हुन्छ । यो रिस कम गर्ने सब भन्दा राम्रो तरिका हो । मैले पनि यो तरिका अपनाएको छु र खुसी भएको छु ।
७. Self Help Words ( स्याम सहायता ) को प्रयोग गर्न जन्नुस-
यदी तपाई दिनमा दुइ वा तिन चोटी Self Help Words को प्रयोग गर्नु हुन्छ भने तपाइलाई रिस आउदैन ( लाग्दैन ) यदी आउछ भने त्यो पनि बहुत कम आउछ । तपाई योसबै Self Help Words हरुको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ।
मा एउटा शान्तिप्रिय व्यक्ति हो ।
मा सधै सकारात्मक रहन्छु ।
मा सधै खुशी रहन्छु । आदि ।
Also Read:- यी काम गर्नुस तपाइको जीवन सुखी हुनेछ ।
रिसबाट बाच्नको लागि तपाई किताब पढ्न सक्नु हुन्छ । यसको लागि तपाई दिनदिनै कुनै किताबको ७ वा ८ पाना पढ्न सक्नु हुन्छ, जुन किताबले तपाइलाई राम्रो विचार दियोस । गेम खेल्नु पनि रिसबाट बच्ने एउटा राम्रो उपाय हो । यसबाट तपाई स्वास्थ्य र राम्रो महसुस गर्नु हुन्छ ।
व्यक्ति सधै सकारात्मक मानसिकता को हुनु पर्छ । जहिले पनि रिस उठछ भने सकारात्मक सोच्न सुरु गरिहाल्ने । तपाई कुनै सकारत्मक कार्यमा सहभागी हुन् सक्नु हुन्छ । यी सबै गर्नाले तपाइको रिस टाढा भइहाल्छ ।
यदी तपाइलाई गित सुन्न मन लाग्छ भने अवस्य गित सुन्ने । रिसलाई भगाउनलाई तपाई ध्यान पनि गर्न सक्नु हुन्छ । यसको साथै तपाई Morning Walk र योगा गर्न सक्नु हुन्छ । यी सबै सकारात्मक कार्य गर्नाले तपाई ताजा भएको महसुस गर्नु हुन्छ । र तपाइलाई कम रिस लाग्छ ।
आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण वा कम गर्ने तरिका कस्तो लग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया अवस्य दिनु होला !
how to control anger in nepali, how to control stress in nepali, stress management in nepali, anger control in nepali, how to be happy in nepali, life tips in nepali, how to live happy in nepali, how to grow memory power in nepali, how to success in nepali #stressmanagement #angermanagemnet #angercontrol #stresscontrol #lovelumbini #ilovelumbini
One thought on “रिसलाई नियन्त्रण गर्ने १०वटा तरिकाहरु । How To Control Anger In Nepali”
Pingback: Top 10 Beautiful bedroom designs For Home by Lovelumbini
ShareTweetSharePin0 SharesBest Quality Of Rich Person To Success : धनी मान्छेहरुमा यस्तो गुण हुन्छ जुन हरेक मान्छेमा हुदैन | मान्छेहरु Rich vs Poor को कुरा गर्छन | र गरिब वा धनी मान्छेहरुको मानसिकता र उनीहरुको गुन्वात्ता को बारेमा सुनछन् र चर्चा गर्छन | यो कुरा साचो हो कि धनी र […]
Top 15 Ceiling Design Ideas For Bhairahwa, Nepal
Anil Patel 11 months ago 1
सरकारी शिक्षकको तलब कटौती गरेर निजीका शिक्षकलाई देउ– सुग्रीम वि.क
The Mindset: Growth or Fixed?
Anil Patel 12 months ago 1
स्मार्ट कसरी बन्ने ? How To Become Smart ? In Nepali
Anil Patel9months ago 5
How Much Cost lies of Manufacturing One Single Rupee Coin ? TEF #3